Howlgalada Amphibious iyo Amphibhibing Shipult TCG Anadolu | RayHaber | raillynews
HomeISDIFAACAbaddaHowlgalada Amphibious iyo Amphibhibing Shipult TCG Anadolu
howl galada xamuulka ah iyo Diyaaradda TCG ee Anatolian
Taariikhda hawlgallada halista ah waxay dib ugu noqonaysaa 1200-naadkii ka hor Masiixa. Sannadihiias, Masar waxaa soo weeraray dagaalyahanno ku noolaa jasiiradaha badda Mediterranean iyo xeebta Koonfurta Yurub. Mar labaad BC Giriiggii hore ee weerarayay Troy qarnigii 1200-naadkii ayaa la yimid hawlgal aan caadi aheyn. Ama qabsashadii Giriigga ee ciidamadii Faaris ee u aaday Marathon Bay 490 BC…. Dhawaan, Dagaaladii Gallipoli intii lagu jiray Dagaalkii koowaad ee Adduunka, Dhul-gariirkii Normandy, hawlgalkii millatari ee ugu weynaa ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka, kaas oo badda, cirka iyo dhulka ay si wada jir ah uga wada qaybgaleen, iyo Nabadda Qubrus oo ay ciidammada Qalabka Sida ee Turkiga fuliyeen 1 iyaga oo ka kooban walxaha badda, dhulka iyo hawada. shaqeynaya ...
Howlgal amni xoogleh / wareejin ciidan waa hawlgal militari oo laga bilaabay badda si looga saaro ciidamada badda iyo kuwa dhulka ee ay maraakiibta ku qaadaan, lagu tababbaray hawlgallada degitaanka, oo lagu qalabeeyay qalab ku habboon iyo hub, loona raro xeebaha waddan loo arko cadow ama cadow suurtagal ah. Hawlgal xasuuq leh wuxuu u baahan yahay ku lug lahaansho hawleed aad u balaaran waxaana fuliya ficilka wadajirka ah ee ciidamada la tababaray, abaabulay iyo qalabaysan ee howlaha dagaalka kala duwan. Hawlaha amp-ka waxaa loo fulin karaa oo keliya ujeedooyin militari, laakiin sidoo kale gargaarka bini'aadanimo.
Howlgallada halista ah waxay adeegsadaan waxyaabaha la yaabka leh waxayna ka faa'iideysanayaan daciifnimada cadawga iyagoo adeegsanaya xooggooda dagaalka goobta iyo waqtiga ugu faa iidada badan. Hanjabaadaha halista ah ee soo degidda waxay ku dhiirrigelineysaa cadawga inay hagto ciidamadooda, saxdaa boosaska difaaca, ilaha ugu weyn u dirto difaaca xeebta, ama u kala dirto ciidamada. Marka laga hadlayo khatartaas oo kale, isku dayga cadowga ee lagu difaacayo xeebta ayaa sababi kara inuu sameeyo dadaalo qaali ah.
Hawlgallada xannibaadda leh waxaa ka mid noqon kara halista sare iyo sidoo kale dadaallo dib-u-celin heer sare ah si loo qabto hawlo muhiim ah. Qalliinka Amphibing; Waxay ka hadlaysaa hawlgallo kala duwan sida howlgalka ciidamada duulaanka ah, howl galada hawada.
Waxaa jira shan marxaladood oo qalliinka cambaareynta ah:
Diyaarinta iyo Qorsheynta
Gudbinta Badda iyo Weerarada Amphibious
Dib-u-wareejinta / Dib-u-habeynta
Si loo helo madax xeebta saacadihii ugu horreeyay ee howlgalka, gaar ahaan marxaladda ay dhaqdhaqaaqa maraakiibtadu ku sii socdaan, waa in maraakiibta iyo walxaha hawada sare laga ilaaliyaa, marka laga reebo in ciidamada xeebta jooga ay haystaan ​​qalab ku filan oo looga difaacayo weerarada cirka ee cirka iyo dhulka.
Waxaa jira laba howlo muhiim ah oo waayir ah taariikhdeena. Bishii Abriil 25, 1915, ciidammada ANZAC waxay billaabeen hawlgallada degitaanka xeebta Gallipoli Peninsula, iyagoo ilaalinaaya ciidamada badda ee xulafada la ah. Aagagga xeebta waxaa difaacay ciidamado tabar daran, maadaama aan la ogeyn goobta saxda ah ee weerarka. Ciidamada waaweyn waxay sugayeen gadaashooda meelo nabdoon oo ka fog madaafiicda ciidamada cadawga. Sidaa daraadeed, inkasta oo ciidamada cadowga, oo sameeyay xoogaa horumar ah saacadihii ugu horreeyay ee degitaanka, laga hor istaagay inuu ugu gudbo qaybaha gudaha oo leh waxqabadyo waqtiyeysan oo waqti ku habboon leh, isku dhacyo ayaa dhacay inta u dhaxeysa godadka illaa iyo Janaayo 9, 1916, markii ciidammada cadowga laga saaray. Ciidamada Turkiga ee dhinaca difaaca waxay ku guuleysteen inay sii hayaan ciidamada cadawga dhanka xeebta in kasta oo cadowgu uu taageeray ciidamada badda ayna xaqiijiyeen ka bixitaankooda iyagoo jabiyay go'aankooda.
In kasta oo Ciidamada Qalabka Sida ee Turkigu ay hawlahooda hawadu ku xad gudbeen hawlo dhowr ah oo ay u gudbiyeen Qubrus dhowr jeer sababa la xiriira weeraradii ay Giriigtu ku hayeen shacabka Turkiga ee jasiiraddaas ku sugnaa, laakiin sanadkii 1964, rabshadaha sii kordhayay awgeed, howlgalka wuxuu u baahday labadaba TAF iyo tababar ku filan iyo aalado hawlgalka noocan ah. run uma noqonin cadaadiska caalamiga ah awgood. Hawlgalkii degitaanka ee 1964, Navy ma lahayn markab soo dego, mana helikobtarro. Ciidamada waxaa loo isticmaalaa in lagu daro xamuul militari iyo rayid jasiiradda. in lagu qaado maraakiibta shixnadaha. Qaabkaan, fulinta hawlgalada gawaarida aan ku habooneyn howlgalka soo dejinta waxay u horseedeen khasaare iyo guuldarrooyin badan. Ilaa Hawlgalka Nabadda, oo la fuliyay Julaay 20, 1974, TAF waxay siisay aaladaha lagama maarmaanka u ah hawlgalka soo dejinta, tababbara shaqaalaheeda waxaana loo diyaariyey qabashada howlaha sirdoonka ee loo baahan yahay. Qaabkaas, wuxuu qabsaday cadowga, kaasoo rumeysan inaanan qalliin sameyn karin, wuxuuna ku guuleystey inuu horay uga socdo taageerada ciidamada cirka, isagoo ka qaadaya askarta badda iyo hawada ilaa jasiiradda, iyagoo haysta madaxa xeebta iyo qaybaha hoose ee jasiiradda.
Hawlgallada degitaanka ee la sameeyay intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, askartu waxay u dhaqaaqeen dhanka dhulka iyagoo wata maraakiibta dagaalka ee ilaaliya maraakiibta dagaalka iyo diyaaradda, halka khadadka difaaca ee cadawga lagu duqeeyey maraakiibta iyo diyaaradaha, halka askartu ay inta badan ku lumiyaan dab aad u culus iyagoo wata gaadiidkooda liita ee ilaaliya gaadiidleyda ka soo daga maraakiibtaas. xeebta ayay aadi lahaayeen. Waqtiga iyo horumarka teknolojiyadda ah waxay keeneen isbadallo meelo badan laga keenay maraakiibta loo adeegsado howlahan ilaa markab.
Aynu akhrino tusaale ah isbadaladaan xusuusta Amphibious Marine Corps, Bora Kutluhan: Waxay ahayd Oktoobar 1975. Wadamada NATO ee leh Amphibious Force waxay jimicsi aan caadi aheyn ku sameynayeen Gacanka Saros ee Waqooyiga Aegean. Magaca layliga '' Express Express Deep '', wadamada ka qeyb galaya waa Mareykanka Mareykanka [USA], UK, Italy iyo Turkey. Guutada 3-aad ee Amphibious Marine Infantry Battalion, TCG Serdar (L-4o2) iyo tiro ku filan oo LCT ah oo ka socda Ciidamada Badda Turkiga ayaa ka qeyb qaatay layligan. Markii aan ahaa darajada Lieutenant, waxaan sidoo kale ka qeybqaatey layligan shirkadayda anigoo ah Taliyaha Guud ee Guutadaas. Markii aan nimid goobta Amphibious Destination Site [AHS] ee Saros Bay, waxaa jiray daraasiin doomo waaweyn iyo kuwa yar yar oo badda saaran oo leh TCG Serdar aan ku jirno. Midowgeena wuxuu jiifay xerooyinka hoose ee tareenka TCG Serdar. Inta lagu gudajiray 12-maalmood 'Wajiga Isgoyska Badda', 4PT ADPT ayaa jiifay oo halkan taagan, wuxuu ku sameeyay isboortiisii ​​iyo tababarkiisii ​​sagxadda sare, wuxuu iska caabiyey xaalado kala duwan oo badda ah, wuxuuna sameeyay dadaal inuu diyaar u noqdo ficilkiisa xeebta. Hadda wajigii ugu nugul uguna muhiimsanaa ee hawlgalku wuu bilaabmay. Howlgalka Doonta-Xeebta. Marxaladan, Ururka midowga waxaa loo abaabulay sidii 'Boat Teams' waxaana hoos ugu soo degay gawaarida degida ee loo qoondeeyay iyaga oo raacaya hirarka soo socda ee xeebta mara websiyada laga xayiray saldhigyada hoose ee dekeda iyo dekada. Isirkan; Marka hore hubkii loo adeegsaday markabku, 57mm kubadaha Aan-Soocelin, 81mm Mortars iyo Qoryaha mashiinka 12.7mm ah, ayaa hoos loogu dhigay doomaha iyaga oo loo adeegsanayo xargaha hagista, ka dibna ciidamada badda ayaa hoos ugu dhaadhacayay doomaha afar saf. Hawshani waxay qaadatay waqti in yar iyo dareenka awooda halista ah ee dhamaan noocyada hanjabaada oo kordhay intii hawshu socotay. Tani waa markii ugu horreysay ee aan arko LPDs. Xargaha gadaashiisa ayaa furan. Ciidamada Mareykanka iyo Ingriiska waxay ka baxsan yihiin kuwa furfuran ee AAVs hadda ah, ka dibna loo yaqaan LVTP, iyo xawaareheena ugu yaraan saddex illaa afar jeer (LCT-yadayada) waxay leeyihiin xawaaraha ugu badan ee 4-5 mayl saac / saac. way sii deyn doonaan oo waxay gaarayaan ilaa 2mil) iyagoo si nabad ah oo dhaqso leh uga soo degaya markabka ilaa xeebta, isla markaana joojiya si aan kala go 'lahayn oo ay galaan booska koowaad ee daboolan, kana sii daayaan Maraakiibta Cirka ee LVTP-yada halkan. Intii aan daawanaynay, "Miyaan maalin maalmaha ka mid ah heli doonnaa maraakiib iyo gaas noocaas ah?" Si fiican ayaan u xasuustaa inaan soo maray. La iima siin. Intii lagu gudajiray howlahayga Guul Amphibious Marine Infantry Brigade, marwalba waxaan aaday xeebta ilaa dhexda. ”
Aad ayey muhiim u tahay in unugyada fulin doona howlgalka xasuuqa badan ay ku nool yihiin bada, ay caadeystaan ​​waxyeeladooda, ogaadaan sida loo dhaqmo haddii ay jirto xaalad degdeg ah oo lagu tababarayo tan. Sababtaas awgeed, ciidamada badda ee Turkiga sidoo kale; Waqtigaas, TCG Ertuğrul, TCG Serdar iyo TCG Karamürselbey Class Turkish LSTs waxay isku dayeen inay ka dhabeeyaan arintaan waqtiyadii dambe TCG Erkin. Si kastaba ha noqotee, maadaama LSTs ay haystaan ​​kaliya inta ugu badan ee shaqaalaha taangiyada iyo gawaarida kale ee ay qaadi doonaan; Ciidanka Badda ee Badweynta Hindiya waxay si joogto ah u silcin jireen markabyada iyo ciidamada badda. LPDs (Landing Platform Dock / Landing Craft Craft), oo mashruuceeda la bilaabay, ayaa ah maraakiib awood u leh inay dejiso ugu yaraan 6oo-7oo Marine Corps ayna la kulmaan cunno, cabbitaan, caafimaad iyo baahiyo kale inta lagu gudajiro doonyaha muddada dheer.
Maaddaama LPDs ay yihiin maraakiib 'liitaa', deyrarkooda hoose ayaa qaadi kara biyo, iyo maadaama gawaarida ka saari doonta midowga ay ku yaalliin doomahan, ciidamada badda ama cutubyada ay qaadaan ayaa lagu xiraa gawaarida degida waxayna si ammaan ah uga soo xiran doonaan markabka. LPDs sidoo kale diyaar ayey u yihiin howlaha helikabtarka. Dekadaha loo abuuray ujeedo this; qaybna waxay ku taalaa salka sare ee markabka iyo qayb kalena sagxadda gadaasheeda.
Mashruuca Maraakiibta Pool
Ciidamada Badda Turkiga waxay leeyihiin mid ka mid ah Amphibious weyn ee Badda Mediterranean-ka, oo leh maraakiibta cusub ee wax soo iibsiga maraakiibta sannadihii la soo dhaafay, waxay kordhisay awoodaha jira ee Dhul gariirka iyo Amphibious Marine Infantry Brigade oo gaarsiin kara heer dabooli kara shuruudaha dagaalka qarniga 21-aad. Qaab dhismeedkaan, 8 maraakiibta wax soo saar (LCT) iyo 2 markab oo soo saarid (LST) ayaa la geeyay.
Kuwaas ka sokow, ka dib Hawlgalkii Nabadda ee Qubrus, oo la fuliyay 1974, qiyaasta ugu weyn ee Wareejinta Ciidamada (Saadaasha Caalamiga) waxaa laga fuliyay Soomaaliya, Albania, Bosnia iyo Herzegovina iyo Kosovo oo hoos yimaada dalladda Qaramada Midoobay iyo NATO. Ciidamada Badda Turkiga, oo xaqiiqsanaya adeegsiga tas-hiilaadkooda iyo awoodoodii halista ahayd, ayaa bilaabay hawlahooda dabayaaqadii 90meeyadii in la soo bandhigo Markab Pool Landing ah oo loo isticmaali karo musiibooyinka dabiiciga ah sida masiibooyinka dhulgariir ee ka dhacay dalkeenna. Xaaladda taagan, Dukumiinti Codsi Macluumaad (BID) ayaa waxaa daabacay Agaasinka Warshadaha Difaaca bishii Juun 2000 markabkuna wuxuu damacsanaa inuu shaqada soo galo 2006.
Xaaladda guud, LPD, oo la filayo inay awoodi karto inay buuxiso baahiyaha iyo cabitaanka baahiyaha Amphibious Marine Infantry Battalion, oo ka koobnaan doonta 615 qof, marka laga reebo shaqaalaha markabka, muddo 30 maalmood ah iyo inay keydiso agabyada lagama maarmaanka u ah taakuleynta logistikada ee 755-ta Ciidamada Qalabka Badda, waxay leeyihiin laba guud oo 15-tan ah. Waxaa la weeydiiyay in la helo diyaarad helicopter ah halkaasoo helikobtar deck ah iyo afar helikobtar oo culeyskeedu yahay 15 tan lageyn karo isla waqtigaas, taasoo u oggolaanaysa Ujeedada / Submarine Defense War (DSH) iyo Surface Warfare (SUH) helikobtar helikobtar inay qaadaan isla markaana isku halleystaan ​​waqti isku mid ah. Si aad u yeelato xarun tan iyo xarun caafimaad oo u adeegi karta 12.000 bukaan oo isku mar ah inta u dhaxaysa Turkiga ee ku saabsan dhismaha ama qaabaynta naqshad gebi ahaanba cusub oo ka socota LPD-ta qorshaysan ee 15.000 ilaa 10 tan la saadaaliyay. Si kastaba ha noqotee, wax horumar ah oo la taaban karo lagama helin mashruuca mashruucanna waxaa la saaray khaanadaha sannadaha soo socda iyadoo la eegayo dhibaatada xiisadda dhaqaale.
Hawsha labaad ee qandaraaska, go'aanka ugu horreeya ee Mashruuca Soo-dejinta (LPD) waxaa lagu qaatay shirkii Gudiga Fulinta Warshadaha Difaaca (SSİK) oo la qabtay 22 Juun 2005 iyo dib-u-eegista heerka Kheyraadka iyo abaabullada la xiriira ayaa laga sameeyay SSIK ee 12 Disember 2006. Dukumentiga Codsiga Macluumaadka (BID) waxaa daabacay Undersecretariat ee warshadaha Difaaca si loo helo macluumaadka maamulka, dhaqaalaha iyo farsamada shirkadaha doonaya inay kaqaybqaataan howlaha mashruuca, iyo 06 shirkadood oo gudaha ah iyo kuwa ajnabi ahba waxay uga jawaabeen BID, oo waqtigoodii jawaaba uu dhacay 2007 Agoosto 10. Qiimaynta iyo baadhitaannadii ka dhashay illaa laba sano ku dhawaad, SSB waxay soo saartay Wicitaan Soo-jeedin (TÇD) toddobo markab oo kuwa gaarka loo leeyahay ah oo lagu soo daray Dokumentiga Istaraatiijiyada Wershadaha Difaaca ee Febraayo 2007.
Maraakiibta waaxaha gaarka loo leeyahay ee lagu daabacay TÇD waa:
Jidadka Dhismaha Ciidamada Badda ee Anatolian
Warshadaha Birta Birta iyo Ganacsiga
Warshadaha Dhismaha DEARSAN
Warshadda Dhismaha Badda ee DESAN
Warshadaha Maraakiibta Badda ee Magaalada Istanbul
Warshadaha Maraakiibta RMK Marine
Maraakiibta ayaa laga codsaday inay u soo gudbiyaan qorshahooda SSB illaa Noofambar 2010. Markabka LPD, oo loo qorsheeyay in la dhiso shan sano, ayaa loo adeegsan karaa gargaarka bini'aadannimo iyo howlaha nabad ilaalinta marka lagu daro howlgalka baaxada leh.
Mashruuca LPD; 1 Gawaarida Farsamada ee Makaanikada iyo 4 Gawaarida Dhulka Kiimikada leh (LCM), 27 Gawaarida Gawaarida Amphibious Armored (AAV), 2 Gawaarida Diyaaradaha iyo Shaqsiyaadka (LCVP), 1 gaari gaashaandhiga hagida iyo 2 Doomaha Doomaha Doomaha Daran ( Waxaa ku jira saadinta Rakida Hubka Inflatable Boat / RHIB). LPD waxay lahaan doontaa awood ay ku wadato wadar ahaan 8 helikobtar, 94 gawaadhi noocyadooda kala duwan leh iyo Amphibious Marine Infantry Battalion. Ciidamada Badda ee Turkiga ayaa sidoo kale leh 2 mashruuc oo wax lagu soo iibsado oo kuwa qumaatiga u kaca ah (LCAC), oo 4 ka mid ah la geynayo LPD, si ay si kedis ah uga falceliyaan howl galada.
FNSS ZAHA Gawaarida Gaashaaman ee Armored Gawaari (AAV)
Markabka LPD, waxaa jiri doona meel helikobtar ah (qaadis / baritaan) si loogu oggolaado qaadista iyo soo degidda afar GM / DSH / SUH ama Helicopters Assault Helicopters isla waqtigaas oo ah 15-t. Ugu yaraan afar SeaHawk ama AH-1W / T129 helikobtarro weerar ah iyo saddex FireScout-u eg Ship-to-Ship UAVs (G-UAVs) ayaa lagu qaadi karaa gantaalka helikabtarka. On LPD la filayaa in lagu qalabeeyo ADVENT; SMART-S Mk2 3-BAR, Raadinta Radar, Alper LPI Radar iyo Son Clearance Sonar (xijaab la rakibay) oo leh sheyga Aselsan AselFLIR-300D, Nidaamka Digniinta Laser, ARES-2N ED / ET Systems, IRST, Shield Chaff / IR Decoy Nidaamka Xakameynta Nidaamka LN-270 Gyro, Hızır oo saldhig u ah TKAS iyo Nidaamka IFF, ÇAVLİS (Kobc suurtagal ah oo ku xirnaan kara Link-11 / Link-16 iyo Link-22) iyo Nidaamyada SatCom. Laba qori oo nooca xamuulka ah ah oo loo yaqaan '4omm Fast Forty Type' qori nooca badda ah [AselFLIR-4D qalabaysan], oo lagu rakibay Nidaamka Xakameynta Dab-demiska ee Aselsan 300omm [TAKS] si loogu isticmaalo ka hortagga markabka, dusha sare iyo bartilmaameedka hawada, laba 2omm Phalanx Close Waxay ku hubaysan doontaa Nidaamka Difaaca [CIWS] iyo saddex 12.7mm STAMP. Si kastaba ha noqotee, waxaa la cadeeyay in qalabka hubka uu wax iska beddeli karo inta lagu jiro gorgortanka heshiiska iyo Nidaamka Gantaalaha Dhimirka ee RAM Self-ka lagu dari karo xirmada.
Mashruuca Pool Land Craft Craft (LPD); Guutada ugu yar (550 ilaa 700 oo shaqaale ah) oo loo adeegsan karo Aegean, Badda Madoow iyo aagagga howlgalka Mediterranean iyo, haddii loo baahdo, Badweynta Hindiya [Waqooyiga Jasiiradda Carbeed, Galbeedka Hindiya] iyo Badweynta Atlanta (Galbeedka Yurub, Waqooyiga Afrika] waxay awood u yeelan doontaa in ay ku wareejiso xoog weyn baaxaddeeda dhibaatada iyada oo gacanteeda macquul ah iyada oo aan loo baahnayn taageero saldhig guri. LPD, oo shaqadiisa ugu weyn lagu qeexay inay tahay Bedelka Xoogga iyo Amphibious Operation, waxay lahaan doontaa ugu yaraan 2.000 sano oo nolol jir ahaaneed ah, iyadoo lagu saleynayo doonida sanadlaha ah ee 40-saacadood. Badda Heerka Sare ee Diyaar garowga loo adeegsado ee la xariirta howlgalada ay maamusho NATO iyadoo loo marayo Xarunta Wadajirka Hawlaha Ciidamada Badda (MHDGG) oo ka koobnaan doonta Xarunta Howlgalada Ciidamada Shacbiyad leh iyo Xarunta Howlgallada Ciidamada, kuwaas oo wadarta miisaankooda (culeys buuxa) la filayo in ay gaaraan 18-20.000 tan. Xarunta shaqaalaha (HRF (M)) Xaruntiisa ayaa sidoo kale lagu dari doonaa. LPD, oo yeelan doonta nidaam xakameyn sarre oo talis iyo isgaarsiin ah (C3) kaabayaasha nidaamka, ayaa sidaas u adeegi kara labadaba Markabka Calanka iyo Ship Command.
Markabkan, waxaa ku jiri kara isbadal fikradeed oo muhiim ah Ciidamada Badda Turkiga. Sababtoo ah maraakiibta noocan oo kale ah waa dhul hoosaad muhiim ah, dusha sare iyo bartilmaameedka xamuulkooda qaaliga ah. Waa inuu ku dhaqaaqo waxyaabo dusha sare ah oo sugi kara difaaciisa saddex-geesoodka ah dhammaan khatarahaas. Tan macnaheedu waa 'Task Force'. Markaa mustaqbalka dhow, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan aragno Howlgal Amphibious oo ah ugu yaraan 5-6 markab oo ku shiraacaya baddeenna. Amphibious Force wuxuu siiyaa qofka heysta awood heer sare ah oo ku dayacan kara. Daarnaanku waa mid ka mid ah faa'iidooyinka kale ee ay bixiso. Waa mid ka mid ah mudnaanaha kale ee lagu qori karo inuu xoog leeyahay waqti kasta gobolka aad rabto.
Gudiga Fulinta Warshadaha Difaaca [SSİK] wuxuu wadahadalo qandaraas la galay Sedef Gemi İnşaat AŞ [Sedef Shipyard] mashruuca Pool Docking Ship (LPD), kaas oo ay ku dhameystireen Undersecretariat ee warshadaha Difaaca 26kii Diseembar 2013, wax heshiis ahna lama gaarin shirkada ayaa tiri. Lacala waxaa la go’aansaday in la sii wado wadahadalada qandaraaska lala galay Desan Deniz İnşaat Sanayi A.Ş. Wadahadalka qandaraaska u dhexeeya SSB iyo Sedef Shipyard wuxuu bilaabmay 19 Febraayo 2014.
Markabka Pool Landing Ship (LPD) wuxuu lamid yahay Juan Carlos I (L-61) Doklu Helicopter Ship [LHD] oo ay dhistay Navantia oo ku taal Sedef Shipyard ee Tuzla, oo leh naqshadeynta, wareejinta teknolojiyada, qalabka iyo taageerada farsamada ee ay bixiso Navantia. wuxuuna noqon doonaa nooc dib loo eegay iyadoo la raacayo codsiyada DzKK. Markabka waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa qaab dhismeedka howlaha masiibo ee dabiiciga ah (DAFYAR) haddii loo baahdo. Thanks to isbitaalkeeda oo buuxa iyo qolka qalliinka, waxaa loo adeegsan karaa taageero caafimaad inta ay jirto baaxadda musiibo dabiiciga ah, gargaarka bina-aadamnimada iyo hawlgallada daadguurinta qaxootiga.
Munaasabadda dhismaha waxaa lagu qabtay Abriil 1, 2015 mashruuca Multi-Purpose Amphibious Assault Ship (LHD), kaasoo qandaraaskiisa lagu kala saxiixday SSB iyo Sedef Shipyard 30dii Juun 2016. Saxiixa heshiiska kadib, isbedello qaar ayaa la sameeyay si loo raro diyaaradda F-35B VTOL ee la socota iyada oo la raacayo dalabka DzKK ee go’aaminta qaabeynta kama dambeysta ah ee markabku yeelan doono. Intaa waxaa sii dheer, diyaaradda 'qaadanka' ee loo yaqaan 'Ski-Jump) ayaa la cusbooneysiiyay si ay ugu haboonaato helikabtarrada dabaqadda dhexe iyo kuwa culus iyo diyaaradda qumaatiga u kaca (MV-120) iyo UAVs oo wata cillad soo dejin / qaadis ah oo ah 35 tan iyo Waxaa hubaal ah inay ku taallo dusha sare garoonka dayuuradaha, oo ay ku jiri doonaan 22 barood (dejinta / qaadista barta).
Isbeddelladaas ka dib, magaca mashruuca dib ayaa loo eegay isagoo ah "Doomaha Weynaha Amphibious Assault Ship (LHD)". TCG ANADOLU LHD, oo hadda dhismihiisu socdo, ayaa loo gelin doonaa alaabada sanadkaan.
Xigasho: A. Emre SİFOĞLU / SavunmaSanayiST
Akhemseddin Gacanka ayaa buuxiyay Bayramda
Akshemseddin Ship Waxaa Bareeshay BURULAŞ ku iibsatay Marmaris
1881 Atatürk Ship Captain Woman
Wasiirka Caafimaadka Koca Ayaa Sheegtay Oo Digniin Ka Bixiyay Xakameynta
Mashruuca Sare ee Gaadiidka Waddaniga ah
Tareenka Tareenka "Anadolu" ee Denizli Rail